Manintona vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: Misokatra ny 2 Aogositra ny ivontoerana mpitsidika an'i Fraport
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Manintona vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: Misokatra ny 2 Aogositra ny ivontoerana mpitsidika an'i Fraport
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovao Mafana Alemana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
"The Globe" no fampirantiana be pitsiny indrindra amin'ny Visitor Center. Ity rindrin'ny LCD mifandraika ity dia mampiseho ny sidina mavitrika rehetra manerantany amin'ny fotoana tena izy.
Misy fisarihana vaovao hisokatra amin'ny 2 Aogositra ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: ny multimedia Center Fraport Visitor ao amin'ny Terminal 1, Hall C, dia handray ireo vahininy voalohany ara-potoana amin'ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra.
Ny fampirantiana mifandraika amin'izany dia mamela ny mpitsidika amin'ny sokajin-taona rehetra hiaina ny tontolon'ny fiaramanidina manintona akaiky.
Fampirantiana mampientanentana sy manodidina ny 30 eo ho eo no manome fotoana hiaina ny tobin'ny fiaramanidina lehibe indrindra any Alemana amin'ny fomba vaovao tanteraka.
Amin'ny velaran-tany 1,200 metatra toradroa, ny fampiratiana dia manome topy maso mahaliana ao ambadiky ny seho ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt sy ny fiaramanidina amin'ny ankapobeny.
Ireo mpitsidika dia tsy vitan'ny hoe mianatra momba ny fiasan'ny seranam-piaramanidina isan'andro; izy ireo koa dia manana fotoana hijerena ny tantarany, hahita ny haitao fiaramanidina, ary handinika ny ho avin'ny sidina.
Ny fampirantiana dia manasa ny vahiny hifampiresaka sy hiroboka. Ao anatin'ny lalao iray, ny mpitsidika dia nanandrana ny fahaizan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fitarihana ny Airbus A320neo mankany amin'ny toeran'ny fijanonany. Misongadina iray ihany koa ny dia virtoaly amin'ny alàlan'ny rafitra fikirakirana entana ao amin'ny seranam-piara-manidina. Dr. Stefan Schulte, CEO ao Fraport, dia nilaza fa: "Ny ivon-toeran'ny mpitsidika multimedia dia mamela ny olona hahatakatra tsara kokoa sy hiaina mivantana ny tontolon'ny seranam-piaramanidina maro sy sarotra. Ny fanintonana vaovao ihany koa dia ho lakilen'ny fanamafisana ny fifanakalozan-kevitra maharitra amin'ny vondrom-piarahamonintsika eo an-toerana sy ireo vahiny avy any amin'ny faritra hafa any Alemana sy manerantany. ”
"The Globe" no fampirantiana be pitsiny indrindra amin'ny Visitor Center. Ity rindrin'ny LCD mifandraika ity dia mampiseho ny sidina mavitrika rehetra manerantany amin'ny fotoana tena izy. Izy io dia ahitana fampiratiana olona 28, atambatra hamoronana efijery tokana izay manodidina ny 25 metatra toradroa. Tena tsy manam-paharoa ny rafitra: tsy misy toerana hafa afaka maneho ny fivezivezin'ny sidina an'arivony amin'ny antsipiriany toy izany. Ny angon-drakitra momba ny sidina ho an'ny The Globe dia nomen'ny FlightAware, sehatra fanarahana sidina US. Mpiara-miasa amin'ny Fraport miaraka amin'ny FlightAware hanodinana angona ilaina amin'ny asa ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Manokana, ny angona nomen'ny FlightAware dia mamela ny fandaminana tsara kokoa ny fizotry ny seranam-piaramanidina.
Modely 55 metatra toradroa an'ny Airport City (amin'ny ambaratonga 1: 750) dia manasa ny vahiny hiroso amin'ny dia virtoaly hahitana.
Vita ny faramparan'ny taona 2020 ny ivontoerana mpitsidika an'i Fraport, taorian'ny fanamboarana roa taona, izay nitentina 5.7 tapitrisa Euros. “Tsy maintsy nahemorinay ny fanokafana azy imbetsaka noho ny areti-mandringana. Faly kokoa aho noho izany ny manambara ny fisarihana mpitsidika vaovao eto amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Mampisongadina ny tontolon'ny fiainana seranam-piaramanidina ny ivon-toerana ”, hoy ny fanazavan'i Anke Giesen, mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka ao Fraport ary talen'ny Executive of Retail and Real Estate.
Ny tapakila mankany afovoany dia tsy maintsy vidiana mialoha amin'ny Internet www.fra-tours.com/en . Ny fanamafisana ny famandrihana dia takiana mba hidirana. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy tapakila ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Hisokatra isan'andro manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ny Ivon-toerana mpitsidika an'i Fraport. Ny vidin'ny fidirana mahazatra ho an'ny olon-dehibe dia 12 euro. Misy vidiny 10 euro nahena ho an'ny vahiny mendrika manana karama mitovy aminy. Miditra maimaimpoana ny zaza latsaky ny efatra taona. Mandritra ny fialantsasatry ny sekolim-paritra ankehitriny, mifarana amin'ny 27 aogositra, afaka mijanona adiny iray maimaimpoana ireo mpitsidika amin'ny garazy ampahibemaso amin'ny seranam-piaramanidina; ny slip-parking dia tsy maintsy entina any amin'ny latabatra fandraisan'ny mpitsidika ny valiny.
Ny Fraport Visitor Center dia azo asiana toerana manokana ho an'ireo hetsika ihany koa. Izy io dia miaraka amin'ny haitao fampisehoana farany, ary ny panorama seranam-piaramanidina tokana dia mahatonga azy io ho lafika mety tsara amin'ny famoahana vokatra, valandresaka ho an'ny mpanao gazety ary fety amin'ny filentehan'ny masoandro.